तर्साउने होइन मार्ने उदेश्यले बम पड्काइएको थियो !!बम बिस्फोटमा खुट्टा गुमाएका काँग्रेस नेता नारायण कार्की (भिडियो) « Np Online TV
तर्साउने होइन मार्ने उदेश्यले बम पड्काइएको थियो !!बम बिस्फोटमा खुट्टा गुमाएका काँग्रेस नेता नारायण कार्की (भिडियो)
नेपाली काँग्रेसका नेता नारायण बहादुर कार्की। कुरा २०७४ मंसिर १३ गतेको हो। चुनाबी सरगर्मी बढेको थियो। कार्की उदयपुरको प्रतिनिधी सभाका लागी क्षेत्र नं २ मा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारको टिकट पाएर निर्बाचनमा होमिए। चुनावी माहोल ताती रहेको थियो। तत्कालिन माओबादी र एमाले गठबन्धन गरि निर्बाचनमा गएका थिए। यसैपनि उदयपुरमा नेकपाको पक्कड क्षेत्र मानिन्छ। त्यसमा दुई ठुला पार्टी मिलेर निर्बाचनमा जादा कार्की लगाएत कांग्रेस लाइ चुनौती थपिएको थियो। समय प्रतिकुल थियो यद्यपि चुनाबलाई आफ्नो पक्षमा पार्न जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ता लागि परि रहेका थिए। यस्तैमा कार्की लगाएत टिम चुनाबी तयारीमा जोडदार लागेको थियो। चुनाबी तयारीकै दौरान कटारीबाट नेपालटारको आमसभातर्फ जाँदै गर्दा उदयपुरगढी नगरपालिका ६ स्थित दनुवारबेसीमा कार्की सहित उनको साथमा रहेका कार्यकर्तालाई लक्षित गरि ब-म बि&स्फोट गराइयो।
ब-म बि&स्फोटमा परि उम्मेदवार कार्की लगाएत उनको गाडीमा सवार अन्य नेता कार्यकर्ता गम्भीर घाइते भए। घाइते भएका कार्कीलाई तत्काल हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौं ल्याइयो। चुनावका बेला कार्की सवार सवारी साधनमा व-म वि&स्फोट गराइएपछि गम्भिर घाइते भएका उनको ६ महिना लामो उपचार भएको थियो । उपचार क्रममा ब-मले क्षतबिक्षत भएको उनको दाहिने खुट्टाको घुँडा मुनिको भाग काट्न परेको छ । घाइते भई अस्पतालमा थन्किएर बस्नुपर्दा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले विर्सेको तीतो अनुभव पनि व्यहोरे कार्कीले । उपचार खर्चको अभाव त उठाएकै थिए । २०७५ जेठ २० गते आइतवार खुट्टा काटिएको अवस्थामा पार्टी नेतृत्वले बल्ल थाहा पायो । सरकारले त कानमा तेल हालेर बसेको छ । सरकारका मन्त्रीहरु उपचारका लागि विदेशको सयर गर्दा काँग्रेसका यि नेता भने खुट्टा नै काटिनुपर्ने अवस्थामा काठमाडौंको शिक्षण अस्पतालमा ६ महिना विताउन वाध्य भए ।
विस्फोटमा परी करिव दुईहप्ता अचेत भएर बौरिहे पश्चात ६ महिनाको अस्पताल वसाई पछि आफ्नो डेरामा फर्कीएका कार्की अहिले बैशाखिको सहारामा १०÷२० पाईला हिड्न सक्ने भएका छन । व-म वि&स्फोटमा परेर शरिरको भागमा तिलको दानो समेत राख्ने ठाउ नभएको अवस्था वाट गुज्रिएर दाहिने खुट्टा सम्म गुमाएका कार्कीलाई अझ त्यो भन्दा वढि पिडा नारायण कार्की मरी सक्यो भनेर विपक्षिले गरेको दुस्प्रचारले पोलेको रहेछ । कार्कीले स्वदेश नेपाल संगको कुराकानिमा आफु जिवित रहेको र मरीसक्यो भन्ने हरुलाई गाउँमै गएर छिट्टै भेट्ने वताए ।प्रचलित कानुन र निर्वाचन संहिताको अधीनमा रही निर्वाचन प्रचारप्रसारमा खटिएको । तर, विपक्षी पार्टीका उमेदवारले सामान्य मानवीयताको समेत ख्याल नगरेकोमा उनले दुखेसो पोखे ।निर्वाचन नियमावलीनुसार चुनावपूर्व कदाचित् उमेदवारको नि&धन भए निर्वाचनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित हुन्छ । तर त्यति सम्म आफ्ना कार्यकर्तालाई वुझाईदिने कोहि नभएको प्रतिभने कार्कीले पुन दुखेसो दोह्याय । यतिसम्म जानकारी नभएका निमुखा मतदातालाई कसैले बुझाईदिन सकेको भए मत विपक्षीले तान्न नसक्ने कार्कीको वुझाई थियो ।बाकी कुराकानी हेर्नुहोस भिडियोमा: